Bandhigga wadashaqaynta "Ryuko Kawabata vs. Uruurinta Ryutaro Takahashi-Makoto Aida, Tomoko Koike, Hisashi Tenmyouya, Akira Yamaguchi-" | Ururka Horumarinta Dhaqanka Ota Ward
Kulan: Abriil 3deeda (Sabti) ​​-Julaay 9aad (Sun), sanadkii 4aad ee Reiwa
* Qiyaas ahaan kahortaga faafida cudurka cusub ee coronavirus, fadlan xiro maaskaro, farahaaga nadiifi, oo buuxi warqad hubin caafimaad markaad soo gasho matxafka.Waan ku qanacsanahay fahamkaaga iyo wada shaqeyntaada.
Ururinta Ryutaro Takahashi, oo ah mid ka mid ah hogaamiyayaashii Japan ee farshaxanka casriga ah, ayaa lagu soo bandhigi doonaa Hoolka Xusuusta Ryuko oo ay weheliso shaqada Ryuko Kawabata oo ah rinjiile-japan.
Ururinta Mr. Takahashi oo ka badan 2,000 oo xabbo oo ah farshaxanka casriga ah ee Japan ayaa lagu soo bandhigay bandhigyo kala duwan oo ka dhacay Japan iyo dibadaha.Bandhiggan oo cinwaankiisu yahay “Mashruuca Wadashaqaynta”, ayaa la isugu keeni doonaa shaqooyinka afar farshaxan oo matalaya farshaxanka Japan ee casriga ah iyo farshaxannada Ryuko, taageerayaasha Ryuko waxay la soo xiriiri doonaan adduunka fanka casriga ah, iyo fannaaniinta casriga ah waxay noqon doonaan shaqooyinka Ryuko. Waxaan isku dayay bandhig halkaas oo aad dib uga ogaan karto soo jiidashada.
Makoto Aida "Nyuyoku Kuubaku no Zu" iyo Ryuko waxay dagaalyahan ku sawireen shaashad weyn "Koryomine", Tomoko Koike "La Primavera" iyo Ryuko waxay cawska ku dabooleen dahab keliya. "Kusa no Mi", "Neo Senju Kannon", iyo Taalada Buddha “Talada kow iyo tobnaad ee wajiga Kannon Bosatsu” ee guriga Ryuko, iyo Akira Yamaguchi “Gobujin 圖” iyo Ryuko Fadlan si buuxda ugu raaxayso adduunka mala-awaalka qorayaasha isqaba waqti ka dib, sida sawirka dagaalyahankii “Genghis Khan” .
・ [Warsaxaafadeedka] Bandhigga Iskaashiga "Ryuko Kawabata vs. Uruurinta Ryutaro Takahashi"
・ [Flyer] Bandhigga wadashaqaynta "Ryuko Kawabata vs. Uruurinta Ryutaro Takahashi"
Halkan guji dhacdooyinka la xiriira
Makoto Aida << Rinjiyeynta Dagaal SOO CELINTA >> 1996, Ryutaro Takahashi Collection Zero Battle CG Production: Mutsuo Matsuhashi, Sawir: Hideto Nagatsuka Sawir: NAGATSUKA Hideto © AIDA Makoto, Lahaanshaha Mizuma Art Gallery
Kawabata Ryuko "Censer Peak" 1939, Ota Ward Ryuko Hall Hall
Tomoko Konoike "La Primavera" 2002 Uruurinta Ryutaro Takahashi © KONOIKE Tomoko
Ryuko Kawabata "Miraha Cows" 1931, Ota Ward Ryuko Memorial Museum Collection
Hisashi Tenmyouya "Neo Senju Kannon" 2002, Uruurinta Ryutaro Takahashi
《Kow iyo toban weji oo Kannon Bodhisattva taallo》 Xilligii Nara (8c), Ota Ward (lagu xareeyay Matxafka Qaranka Tokyo) Sawirka: TNM Image Archives
Akira Yamaguchi “Gobujin 圖” 2003 Uruurinta Ryutaro Takahashi © YAMAGUCHI Akira, Xushmadda Mizuma Art Gallery
Kawabata Ryuko "Minamoto no Yoshitsune (Genghis Khan)" 1938, Ota Ward Ryuko Hall Hall
Abriil 3aad (Sabti) ​​-July 9 (Sun), sanadkii 4aad ee Reiwa
Isniinta (Furan Isniinta, Ogosto 9-keedii, waxaa la xiray maalinta xigta)
Dadka waaweyn (16 sano iyo wixii ka weyn): 500 yen Caruur (6 sano jir iyo wixii ka weyn): 250 yen
* Waa u bilaash ardayda iskuulka aan gaarin ee jira 65 iyo wixii ka weyn (waa loo baahan yahay shahaado).
Warbixin ku saabsan Ryuko Park
* Albaabku wuxuu furaa waqtiga kor ku xusan, waxaadna si xor ah u booqan kartaa 30 daqiiqo.
3 -ka Sebtembar (Cadceed), Oktoobar 9 -keeda (Cadceed), 19 -da Noofembar (Arbaco / fasax)
Qiyaastii 11 daqiiqo laga bilaabo 30:14 iyo 00:40 maalin kasta
Nidaamka dalabka hore, awoodda 25 qof mar kasta (saldhigga ugu horreeya ee la soo hormariyay)
Waxaad codsan kartaa adigoo wacaya hoteelka (03-3772-0680).
Guji halkan si aad u codsato emayl